Sidee loo nadiifiyaa loona ilaaliyaa faakiyuumlaha
Maaddaama ay tahay qalabka ugu muhiimsan ee nadaafadda guryaha - nadiifinta faakiyuumka, waxay ka ciyaartaa door aad muhiim u ah, ku dhowaad qoys walba waa aalad loo baahan yahay. Huufarka waa fududahay in la isticmaalo, laakiin dad badan ayaan jeclayn nadiifinta iyo dayactirka faakiyuumka. Aynu baranno sida loo nadiifiyo loona ilaaliyo nadiifinta faakiyuumka 'Xiaobian'. www.chinApp.Com bogga internetka ee Shiinaha
1. Ku nadiifi qoraxda iyo alaabada soo uruurinta boodhka baaldiga waqtigiisa, nadiifi shabaqa boodhka iyo bacda shaqo kasta ka dib, hubi inay jirto dalool ama daadasho hawo, iyo si fiican ugu nadiifi shabakada boorka iyo boorsada biyo nadiif ah iyo biyo kulul, oo afuuf qalaji. Waa mamnuuc in la isticmaalo shabag boodh qallalan iyo boorso.
2. Hubi in fiilada korontada iyo furku waxyeelloobeen. Isticmaalka ka dib, dabaysha korontada ku duub xirmo oo ku xir dusha daboolka madaxa.
3. Ka dib nuugista biyaha ka dib, ka hubi dariiqa hawo qaadashada ama qashinka, haddii kale nadiifi oo hubi mawjadda sabaynaysa.
4. Mashiinka waa in si taxaddar leh loo qaadaa oo uusan saameyn dibadeed saameyn ku yeelan.
5. Markuu mashiinku shaqeynayo, waa in la dhigaa meel hawo leh oo qalalan.
6. Markaad nadiifinayso mashiinka, fadlan ku tirtir maro qoyan oo ay ku jiraan biyo ama saabuun dhexdhexaad ah. Waa mamnuuc in lagu quusto madaxa mashiinka weyn biyo lagu nadiifiyo. Ha u isticmaalin saabuunta wax dila sida baatrool iyo biyaha mooska, haddii kale qolofka ayaa dillaacaya
7. Ha ku hayn mashiinka xaalad shaqo oo joogto ah muddo dheer. Fadlan xakamee waqtiga shaqada joogtada ah 2 saacadood gudahood, haddii kale waxay saameyn ku yeelan doontaa nolosha adeegga mashiinka.
8. Marka faakiyuumlaha la isticmaalo muddo dheer, nuugiddu way yaraanaysaa sababo la xiriira xannibaadda mesh shaashadda shaandhada. Si looga hortago dhicitaanka nuugida, shaashadda shaandhada iyo bacda marada waa in si joogto ah biyo loogu sifeeyaa, ka dibna lagu qalajiyaa meel qabow si dib loogu isticmaalo si loo soo celiyo nuugista.
9. Haddii mishiinka weyn uu kulul yahay, ama uu bixinayo ur daran, ama gariir aan caadi ahayn iyo dhawaq, waa in loo diraa si loogu hagaajiyo waqtiga, oo aan lagu qasbin in la isticmaalo.
10. Ha isku laaban tuubada si joogto ah, ha iskula bixin oo ha laaban.
11. Goobta faakiyuumka lagu nadiifiyo yaan la dhigin meel qoyan ama wax daaqaysa illaa iyo inta suurtagal ah, oo meesha hawo-qaadashada qalalan ay tahay in la xusho si looga fogaado waxyeelo jirka gaadha
Ka dib soo saarista Xiaobian, waa inaan ogaanno sida loo nadiifiyo faakiyuumlaha.
Waqtiga boostada: Jan-20-2021
Muxuu nadiifiyaha faakiyuumku sameyn karin?